यस्तो छ विश्वको अनौठो जेल ! जहाँ खानेकुरा हैन मान्छेको मासु खान्छन् ! – Medianp
यस्तो छ विश्वको अनौठो जेल ! जहाँ खानेकुरा हैन मान्छेको मासु खान्छन् !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २९, २०७५१३:५८0
एजेन्सी,२९ भदौ । सबैभन्दा ठूला अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका अपराधीहरु राखिएको रुसको एक जेल जहाँ रहेका कैदीहरुको जिवन निकै कष्टकर रहेको छ । ५ सय जना कैदीहरु अट्ने क्षमता भएको जेलमा ६ हजार जना कैदीहरु राखिएको छ । अपराधीक घटनामा समामेल भएपनि कुनै जेलमा कैदीहरु आरामदायी जीन्दगी बिताउँछन् भने कुनै जेलमा कष्टकर जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै रुसमा रहेको एक जेल जहाँ एक्लै बस्न चाहे भने २० घण्टा मात्र मात्र छुट्टै राखिने गरिन्छ । जेलको क्षमता भन्दा बढी कैदी भएको कारण त्यहाँका कैदीहरु एकअर्काको बिचामा नै मुठभेड गर्ने गर्छन् । कैदीहरुले आफ्नो आफन्तलाई वर्षमा १ पटक मात्र भेट् पाउँछन् ।कैदीहरुको लागि असुरक्षित रहेको जेल त्यहाँ भित्र नै हिंसात्मक घटनाहरु घट्ने गर्छन् ।
यहाँ राखिएका कैदीहरुलाई फाँसिको सजाय दिन पर्यो भने पनि निकै घातक तरिकाले असुल ग्यासको प्रयोग गरेर घातक सुइहरुको प्रयोग गरेर मार्ने गर्छन् । जेल जिवन बिताइरहेका कैदीहरुको लागि असुरक्षित रहेको जेल जहाँ खानेकुरा नपाएपछि एकअर्कालाई मारेर मासु खाने गरेको खबरहरु पनि रहेका छन् ।
रामकहानीको एक हप्ताको व्यापार सार्वजनिक, कति करोड कलेक्सन गर्यो त ?
बाँदर मार्नेलाई पुरस्कार, एउटा मारे ५ सय, समाते ७ सय